ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ကရာချိမြို့၌ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခြင်းကြောင့် လမ်းများ ရေကြီးရေလျှံကာ ယာဉ်အသွားအလာပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ်ပွား - Xinhua News Agency
အစ္စလမ်မာဘတ် ၊ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်သည့် ကရာချိမြို့၌ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လမ်းများပေါ်တွင် ယာဉ်အသွားအလာပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်သည့် ကရာချိမြို့၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးနောက် ရေကြီးရေလျှံမှု ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လမ်းတွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်နေသူတစ်ဦးအား စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်သည့် ကရာချိမြို့၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနေစဉ်အတွင်း မော်တော်ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်သွားလာနေသူများအား စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်သည့် ကရာချိမြို့၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးနောက် ရေကြီးရေလျှံမှု ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လမ်းတွင် ခက်ခဲစွာ သွားလာနေသူတစ်ဦးအား စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်သည့် ကရာချိမြို့၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးနောက် ရေကြီးရေလျှံမှု ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လမ်းအား စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
လမ်းသွားလမ်းလာများက ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကျော်ဖြတ်၍ လှုပ်ရှားရုန်းကန်သွားလာခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
Asia Album: Heavy rains flood street, cause traffic jams in Pakistan’s Karachi
ISLAMABAD, Sept. 24 (Xinhua) — Heavy rains hit Karachi, the southern port city of Pakistan, causing traffic jams on the flooded streets. Pedestrians are struggling to wade through the floodwaters.
Photo 1 – People wade throughaflooded street after heavy rain in the southern Pakistani port city of Karachi on Sept. 23, 2021. (Str/Xinhua)
Photo2– A man drivesamotorbike throughaflooded road after heavy rain in the southern Pakistani port city of Karachi on Sept. 23, 2021. (Str/Xinhua)
Photo3– People ride on motorbikes during heavy rain in the southern Pakistani port city of Karachi on Sept. 23, 2021. (Str/Xinhua)
Photo4– People wade throughaflooded street after heavy rain in the southern Pakistani port city of Karachi on Sept. 23, 2021. (Str/Xinhua)
Photo5– Photo taken on Sept. 23, 2021, showsaflooded road after heavy rain in the southern Pakistani port city of Karachi. (Str/Xinhua)
ထိုင်းနိုင်ငံ ဆမွတ်ပရာခန်ပြည်နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းကြောင့် ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားနေသည်ကို ဩဂုတ် ၂၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်၌ ဂတ်စ်အိုး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၉ ဦး သေဆုံး